Semalt: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanafihana fampihetseham-panoherana miverimberina sy ny fomba hanalavirana azy ireo
Fitomboan'ny fikandrana malaza nosoratana fa tsy Mac miasaNy rafitra efa nandao ny teknolojia gurus dia nanontany tena momba ny anton'izany. Maro no nanamafy fa ity mety ho vokatry ny tanjakaMac raha ny hafa mahita izany noho ny mpisera Windows maro be ka mahatonga azy ho fandrahonana ho an'ny hackers amin'ny tranonkala.Indrisy anefa, ny lazan'ny Mac dia tonga amin'ny fitomboan'ny isan'ny trozona sy ny malware mifandraika amin'ny mety hanimba azy.
Igor Gamanenko, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia mifantoka amin'ny filàn'ny fiarovana ny navigateur fa tsy ny browser ihany koa - php report generation tools.
Loharanon-kery mitondra hery amin'ny tranonkala hackers
Rehefa manome fampahalalana momba ny fitehirizana ao amin'ny tahirin-tserasera ianao, dia manana zavatra andrasana izy ireofa hijanona ho tsiambaratelo. Ny zavatra tsy fantatra dia ny haker-tranonkala iray any amin'ny toerana iray dia mikaroka manodidina ny tranonkalanao mitady ny malemydia manondro ny fanararaotana. Afaka manentana ny fikasany ny iray amin'ireto manaraka ireto.
Mankatia ny fahaizan'izy ireo amin'ny fiarahamonina.
Mitandrema amin'ny orinasanao amin'ny alalan'ny famotehana ny database
Ireo mpampiasa mpampiasa Pilfer.
Ampidiro ny vaovao ilaina amin'ny fivarotana amin'ny tsena mainty. Raha izany dia,Tsy mamela ny sasantsasany izy ireo ary manohy manenjika mandritra ny fotoana maharitra.
Ny antony mahatonga ny hackers amin'ny tranonkala hametraka fangatahana
1. Ny antony dia ny antony. Rehefa nahavita Internet ianao dia nahombytoerana, tsy maintsy misy mpifaninana izay mahatsapa fa tsy manan-kialofana ary mila manao izay azony atao mba hijanona ho manan-danja.
2. Antony ara-politika..Izany dia aseho amin'ny vondrona toy ny Anonymous manoritsoritraizay manosika ny hanafika ny governemanta sy ny fikambanana ara-pinoana dia ny manao fanambarana.
3. Matetika koa ny mpiara-miasa dia miara-miasa amin'ny vahiny satria vokatry ny tsy fahafaham-po.
Ny fanafihana mahery vaika matetika
Amin'ity tranga ity, ny tanjon'ny fanafihana iray amin'ny angon-drakitra dia ny mangalatra, manimba na manovampampiasa mpampiasa. Ohatra, ny hacker amin'ny tranonkala dia afaka manitsy ny vokatra ara-bola amin'ny orinasa iray ary mangalatra ihany koa ny fampahalalana mpanjifatoy ny isa amin'ny carte de crédit.
2. Fitaovan'ny Soratra Masina
Midika izany fa ny fampidirana ny code malgache izay manatanteraka eo amin'ny sisin'ilay niharan-doza.
3. Ny fandavana ny tsy fanajana ny serivisy
Izany dia miteraka adiresy IP miisa arivo izay mikendry ny handrodana tranonkala misy fifamoivoizana.Izany dia mahatonga ny tranokala ho miadana na tsy afaka amin'ny vanim-potoana manokana.
4. Fifampiresahana an-tranokala
Ny mpampiasa iray dia voatery maka rohy na sary iray mandritra ny fivoriana azo itokisana izay fanampianaamin'ny famonoana fanafihana ratsy.
Fomba hiarovana ny harenao sy ny mpampiasa anao
Amin'ny fampihetseham-pandraketan-tranonkafa manodidina ny sakana rehetra etsy ambony, dia tsy misy mpamoronate hanao ny ezaka ataony. Izany dia mahatonga ny fampidirana ireo fepetra fisorohana amin'ny dingana voalohany mankany amin'ny farany. Ny sasanyNy vahaolana dia voafaritra amin'ny asa voafaritra tsara ary ny hafa kosa atao amin'ny dingana tsy tapaka. Famerenana ny fehezan-dalàna, fampandrenesana, ary fandaharam-pikarakarana fihazanamila atao mandritra ny vanim-potoana fampiharana. Raha mitady vahaolana voafetra voafaritra dia afaka misafidy amin'ny fampiharana ilay fampiasanaamin'ny CAPTCHAS, ampiasaina ny fomba fitahirizana amin'ny alam-pahefana automatique na ny fampiasana ny Internet Application Firewall izay manara-maso sy manakona ny metyfanafihana.